चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने डा.केसीको चेतावनी - Health Today Nepal
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने डा.केसीको चेतावनी
काठमाडौ,असोजः चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता एंव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजले अतिरिक्त रकम फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रा.डा.केसीले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता नगरे जुनसुकै बेला आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा उठाएको रकम फिर्ता गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । केसीकै अनसनपछि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोकेको थियो । तर मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको भन्दा बढी रकम असुलेको भन्दै विभिन्न कलेजमा विद्यार्थीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यस्तै,डा.केसीले परासर कोइराला नेतृत्वको समितिले बनाएको मापदण्डअनुसार विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । समितिको मापदण्ड बेगर कुनैपनि नियुक्ति भएमा मान्य नहुने समेत डा. केसीको चेतावनी छ ।
विज्ञप्ती मार्फत डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमडीजीपीको पढाइ तथा शीघ्र एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन शुरु गर्न र सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने काम गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
Previous article काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा एक महिलाले जन्माइन् चम्ल्याहा शिशु
Next article सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्घ एकभएर लड्ने एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सासंद र मेयरहरुको उद्घोष